Mofon’aina – ALATSINAINY 20 NOVAMBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALATSINAINY 20 NOVAMBRA 2017
Fahendren'Andriamanitra, Fampianarana marina, Voninahitr'Andriamanitra
11 Fa efa miseho ny fahasoavan’ Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra,12 mampianatra antsika handà izay toe-panahy tsy araka an’ Andriamanitra sy ny filan’ izao tontolo izao ary ho velona amin’ ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra amin’ izao fiainana ankehitriny izao,13 miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan’ ny voninahitr’ Andriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy,14 Izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika, mba hanavotany antsika ho afaka amin’ ny ota rehetra, sy hanadiovany izay olona ho an’ ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin’ ny asa tsara izany.15 Izany no lazao sy ananaro ary andrarao amin’ ny fahefana rehetra. Aza avela hisy hanao tsinontsinona anao.
TITOSY 2 :11-15
Avoitran’ny Apostoly Paoly amin’ity Epistily ity ny momba ny fahasoavan’ Andriamanitra .
1-Handavana ny ratsy rehetra (and 11-12)
Famonjena ny olona rehetra ny fahasoavan’ Andriamanitra. Koa aharihary eto ny tokony hatao ka holavina , toy ny toe-panahy tsy araka an’ Andriamanitra sy ny filan’izao tontolo izao . Mazava kosa anefa ny tokony hatao, ka harahina dia ny fivelomana araka ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra. Ny fahatongavan’i Jesoa Kristy hamonjy sy hanadio ny mpanota no tena fahasovana lehibe indrindra.
2-Hiandrasana ny Voninahitr’ Andtiamanitra
Tokana ato amin’ny Testamenta vaovao sy amin’ny Baiboly manontolo mihitsy ny filazana fa Andriamanitra lehibe i Jesoa Kristy. Koa ho fitsenana izany voninahitra lehibe loatra izany no antony namonjena antsika, ka nandrotsahany ny fahasoavany amintsika. Ny mpino no hitsena azy, ka ho lavorary ilay vavaka fanaontsika hoe: « ho tonga anie ny fanjakanao ».
3-Mariky ny fanolorantenan’i Kristy (and 14)
Lafiny roa mazava tsara ny fanolorantenan’i Kristy dia ny fanavotana sy ny fanadiovana. Ny manana antoka ihany no mahazo ireo fahafahana ireo. Koa ny Ran’i Jesoa Kristy teo ambony hazo fijaliana irery ihany no antoka lehibe indrindra mahafapo ny fitsaran’ Andriamanitra (Ampitahao Mar 10 :45). Raha izany , isika koa andeha « mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona , masina , sitrak’ Andriamanitra »( Rom 12 :1a)
Ahoana ny hevitrao , fahasoavana ve ny fahazoana harena ?
Mofon'aina - ZOMA 17…